UMujjo khange aphoswe kukwaziswa kwe-iPhone 13 entsha | Ndisuka mac
UMujjo khange aphoswe kukusungulwa kwamatyala kwi-iPhone 13 entsha
Kwi-aftermarket enkulu njengeemveliso ze-Apple, Iimpawu zobungakanani bukaMujjo kufuneka bazise iimveliso zabo ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kokuphulukana nesitampu sabo. Kule meko uMujjo yenye yeefemu zokufikelela kwiimveliso zeApple ezibonelela ngomgangatho onokuthelekiswa naleyo yecompertino firm kodwa ngesimbo sayo.
Njengoko i-iPhone 13 entsha iyimveliso ephambili kulo msitho kaSeptemba, uMujjo ubeka etafileni uthotho lwamatyala ahambelana neemodeli ezahlukeneyo. Kuzo zonke ezi mveliso, umgangatho uphezulu, ke ngaphandle kwamathandabuzo lo tyikityo kufuneka uthathelwe ingqalelo xa siza kuthenga ikhava esemgangathweni.
Umgangatho ophezulu wesikhumba kunye nezixhasi zokukhusela
Iimeko zesikhumba zeMujjo ziyafumaneka kuzo zonke iimodeli ze-iPhone 13, kwaye ngeli xesha kukhuseleko oluphuculweyo. Yintoni ephucula ukhuseleko kule meko ibhekisa ngokucacileyo kwinto yokuba emazantsi evaliweyo avaliwe. Ewe, yayikukuphela kwento "embi" malunga nezembozo ezigqwesileyo kwaye ifemu yayisazi ukuyilungisa ngexesha ngokuvala yonke imiphetho yezigubungelo, nkqu nendawo esezantsi eboniswe kwimifanekiso.
Kwelinye icala, olunye uphuculo kwezi meko yinxalenye ye-bezel egubungela iikhamera. Izembozo ezintsha ngoku ziza nazo i-bezel ephezulu kancinci ejikeleze ikhamera yangemva ye-iPhone eziza kunceda ukukhusela iilensi ezikhutshiweyo kwimikrwelo nakwindawo ezibi.
Into entle ngolu hlobo kukuba ayintsha kwicandelo, inalo amava kwaye siyazi ngokuqinisekileyo ukuba iimveliso abazinikelayo zikumgangatho ophezulu. Ukuba into esiyifunayo ngoku yindlela esemgangathweni, sinokuxhomekeka kwiimodeli ezahlukeneyo abazibonelelayo: isipaji, ukongeza ikhadi kunye nezo zingafaki umnini wekhadi.
Iyahambelana ne I-iPhone 13 Pro, i-iPhone 13 Pro Max, i-iPhone 13 kunye ne-iPhone 13 encinci, amaqweqwe ane Ixabiso ukusuka kwi-44,90 ukuya kwi-54,90 euro (IVAT ifakiwe kubathengi baseYurophu).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » UMujjo khange aphoswe kukusungulwa kwamatyala kwi-iPhone 13 entsha
Ukusukela ngoku kwi-Apple Watch SE iza neshaja ye-USB-C
I-Apple Pay ngoku iyafumaneka eChile